Siyaasadda Kormeerka Iyo Qiimaynta oo lagu ansixiyay shirkii golaha wasiirada DFS. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Siyaasadda Kormeerka Iyo Qiimaynta oo lagu ansixiyay shirkii golaha wasiirada DFS.
Siyaasadda Kormeerka Iyo Qiimaynta oo lagu ansixiyay shirkii golaha wasiirada DFS.
Kulanka golaha wasiirada oo uu shir gudoominayay raisal wasaare Xasan Cali Khayre ayaa waxaa looga hadlay arimo ay ka mid yihiin amniga dalka, hiigsiga dhaqaalaha 2040-ka, Sharciga hanti-dhawrka, siyaasadda kormeerka iyo qiimaynta iyo Soo noolaynta barnaamijka waciyi-gelinta qaranka.
Ugu horayn wasiiru dawlaha wasaarada Amniga Qaranka Maxamuud Maxamed Boonow ayaa laga dhagaystay warbixin la xiriirta xaalada amniga dalka, sidoo kale wasiirka waxaa wax laga waydiiyay halka ay marayaan baaritaanadii la xiriiray weeraradii lagu qaaday xarumaha wasaarada amniga iyo arimaha gudaha, sidoo kale Amb. Daahir Maxamuud Geelle wasiirka wasaarada warfaafinta ayaa laga dhagaystay warbixin la xiriirta qorshaha soo nooleynta barnaamijka wacyi-gelinta qaranka, wuxuuna faah-faahiyay habka ugu haboon oo barnaamijkaas uu ku guulaysan karo, si Shacabka Soomaaliyeed ay uga faa’iideestaan.
Ugu danbayn wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska Aadan Isaaq Cali oo ka war bixiyay kulanka ayaa sheegay in golaha wasiirradu xukuummadda Federaalka Soomaaliya ay ansixiyeen siyaasadda qaran ee Siyaasadda kormeerka iyo qiimaynta oo lagula xisaabtamayo hey’adaha ka hawl gala Soomaaliya, laguna ogaanayo hawlaha ay qabtaan oo wasaaradda qorshaynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ay horay ugu soo gudbisay golaha wasiirrada.